Wasaarada amaanka Qaranka ee dowlada Somalia ayaa ka hadashay dil shalay galab degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho loogu geystay sarkaal la sheegay inuu ka mid ahaa xoogaga Al-Shabaab.
Afhayeenka wasaarada amniga Qaranka Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa sheegay in ciidamada nabad sugida ay fuliyeen howlgal gaar ah oo uu sheegay in lagu dilay sarkaalkan, kaasoo uu xusay inuu ku dhuumaaleysanayey guri ku yaala nawaaxiga isbitaalka SOS ee degmada Heliwaa.
“Ciidamada nabad sugidu waxay fuliyeen howlgal gaar ah ka dib markii ay dadweynaha ka heleen xog ku saabsan sarkaalkan oo magaciisa la oran jiray Nuur Baraxow kaasoo ku dhuumanayey xaafada SOS ee degmada Heliwaa” ayuu intaa ku daray Maxamed Yuusuf.
Waxaa uu sheegay afhayeenku in ciidamadu ay markii hore isku dayeen iney sarkaalkan nolol ku qabtaan balse ay toogteen markii uu bilaabay inuu is difaaco, lana soo baxay hub uu halkaas ku heystay, wuxuuna sheegay in sarkaalkaas uu Al-shabaab u qaabilsanaa gudbinta xogta G/banaadir.
“Waxaan u sheegeynaa shaqsiyaadka nabadiidka ka tirsan ee ku dhuumanaya Muqdisho in xiligoodii dhamaaday, laguna qaban doono gacan bir ah oo aysan ka baxsan Karin, qaarkoodna xogtooda waan heynaa waana ku raad joognaa” ayuu yiri afhayeenka wasaarada amaanka Qaranka.